तेलमा डुबेका शिशिरलाई हेर्न अमेरिकाबाट डाक्टरहरु आए ! नेपालका डाक्टरले नसोचेको रहस्य खोले – Khabar Art Nepal
तेलमा डुबेका शिशिरलाई हेर्न अमेरिकाबाट डाक्टरहरु आए ! नेपालका डाक्टरले नसोचेको रहस्य खोले
By Pasang Tamang	 On २० फाल्गुन २०७५, सोमबार २३:४४
काठमाडौं- कति सुन्दर थियो यो परिवार । प्युठानका २ बर्षका शिशिर खड्का आफ्नो आमा बुवासंग दंग थिए । तर गएको असारको त्यो घटनाले शिशिरको जीवन मात्रै हैन यो परिवारको खुशी नै खोसिदियो । साथीहरुसंग खेलिरहेका शिशिर पुरी पकाउन उमालिरहेको तेलमा डुबे । पानी लिन गएकी आमा फर्केर आउंदा छोराको त्यो अवस्था देखेर मुर्छा परेर ढलिन् ।
यसैबिच शिशिरलाई हेर्न अमेरिकाको न्युयोर्कबाट डाक्टरहरु आएका थिए । किर्तिपुर अस्पतालमा शिशिरलाई हेर्दै उनीहरुले के भने ? के शिशिरको उपचार सम्भव छ ? के प्लाष्टिक सर्जरी गर्न मिल्छ ? त्यसको लागि कति खर्च लाग्छ ? त्यसको लागि भिडियो हेर्नुस
पुरानो बुलेटको च्यारिटी शो पथरीमा